Gaadiid Badeed Ajaanib ah oo fara kulul ku haya Kaluumeysatada & qeyraadka Badda Somalia – SBC
Gaadiid Badeed Ajaanib ah oo fara kulul ku haya Kaluumeysatada & qeyraadka Badda Somalia
Maamulka Deegaanka Garacad oo ka tirsan deegaanada kulaala xeebta dheer ee badda Soomaaliyeed waxaa uu cabasho ka soo saaray gaadiid badeed isugu jira waaweyn iyo yar yar kuwas oo dhibaateyn kula dhaqaaqa kaluumeysatada u shaqo tageysa Badda iyo qeyraadkii dalka.
C/casiis Yuusuf Xaarin oo ka mid ah nabadoonada Deegaankaas ayaa u sheegay saxaafada in cabashadiisan ay soo baxday ka dib markii ay dareemeen dhibaatada ay gaadiidkaasi ku hayaan bada Soomaaliyed.
waxaa kale oo uu intaasi raaciyay Odaygan sheegay in ay dhibaatada ay geystaan gaadiidkaasi jariifla yaasha ay wataan ay noqdeen kuwo soo laalaabta islaamrkaana dhaliyay khasaare dhinacyo badan leh.
Digniin ayuu u diray gaadiidkaasi iyo beesha caalamka isagoona u sheegay in hadii sidan ay wax iska bedeli waayaan ay dib u soo laabaneyso kooxihii burcad badeeda ahaa ee laga reystay sanadihii ugu dambeeyay.
Mar uu ka hadlayay Waxa ay yihin gaadiid badeedkan ayuu sheegay in ay isugu jiraa kuwo loo keenay badda ilaalo iyo kuwo kale oo jariif toos ah u yimid badda, waxayan qariyaan ayuu yiri xiliga ay jariifka sameynayaan astaamahooda ama calamadooda.
Sikastaba ha ahaatee dhowaan waxaa ka digay go’aana ka soo saaray jariifka lagu hayo Badda Soomaaliyeed madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya, isagoona ku hanjabay in ay dacwad heer caalami ah ka gudbin doonaan wadamo uu sheegay in ay garanayaan kana dambeeyaan ku xadgudubka qeyraadka dalkan.
SBC International News .